China High enyukayo steel zokwakha mveliso mveliso kunye nabenzi | Honghua
Le nkqubo yokwakha ephezulu yendlela yokwakha, esiyibizile, yinkqubo yesakhelo esomeleleyo. Izakhelo ezibiyelweyo ziitrantes ezimile nkqo ezichasene nemithwalo yamva ikakhulu amalungu ediagonal adibeneyo kunye neebhanti, enza i-web ye-truss ethe nkqo, kunye neekholamu ezisebenza njengezikhetho.
Iprojekthi yePearl River New Town-
IPearl River New Town West Tower, isakhiwo sentsimbi esiphakamileyo, iZiko lezeMali laseGuangzhou, lavulwa nge-15 ka-Okthobha ka-2010. Esi sakhiwo sineemitha ezingama-432 ukuphakama kwaye sinemigangatho eyi-103. Inqaba yasentshona yayikhanyiswe ngokusesikweni, eyinxalenye iprojekthi yokukhanyisa kwimidlalo yaseAsia.
Ubume benqaba yasentshona bufana "nekristale esekuhleni", kwaye ubume bamkela inkqubo yotyhubhu yegridiid ethambekise ngobuchule. Ikhonkrithi ityhubhu yentsimbi ezele ityhubhu enethambeka elikhulu kwityhubhu eyongezelelweyo, udonga lwekhonkrithi oluqinisiweyo lunombhobho wangaphakathi, kwaye umgangatho wekhonkrithi wentsimbi udibanisa imibhobho yangaphakathi nangaphandle. ukuqina okwaneleyo kwecala kunye nokusebenza gwenxa kwenyikima. Kwimeko yeziganeko ezenzeka ngequbuliso ezinje ngefuthe kunye nokudubula, iya konakaliswa kuphela, kwaye ayizukubangela ukusabela kwetyathanga kunye nokuwa, ke ukhuseleko ngokubanzi lwesakhiwo luphezulu. Uvavanyo lubonakalisile ukuba inqaba inokumelana ne-octave enqabileyo. iinyikima (ubunzulu bokomisa inyikima eGuangzhou ziidigri ezisixhenxe), kwinto yenkulungwane yomoya, abantu abakwinqaba abayi kuziva bengonwabanga. Olu hlobo lwenkqubo kuphela kolusetyenziswayo emhlabeni.
Le nkqubo yokwakha ephezulu yendlela yokwakha, esiyibizile, yinkqubo yesakhelo esomeleleyo. Izakhelo ezibiyelweyo ziitrantes ezimileyo ezimile okwe-cantilevered ezichasene nemithwalo ye-laterals ikakhulu amalungu kunye ne-girders, enza i-web ye-truss ethe nkqo, kunye neekholamu ezisebenza njengezikhetho. Amalungu abhinqileyo aphelisa ukugoba kwimiqadi nakwiikholamu. Izakhelo zentsimbi, imiqadi yentsimbi kunye neentsika zentsimbi zonke ziyilwe ngumzi-mveliso wethu.
Isetyenziswa kulwakhiwo lwentsimbi
Le nkqubo ilungele ulwakhiwo olunemigangatho emininzi kwinqanaba eliphantsi ukuya kubude obuphakathi.
ngokufanelekileyo nangokunoqoqosho ukomeleza ukuqina kwecala kunye nokumelana nenkqubo yesakhelo esiqinileyo.
Le nkqubo ivumela ukusetyenziswa kwamalungu amade kwisakhiwo.
Uncedo olubalaseleyo lwesakhelo esidityanisiweyo kukuba, inokuphindaphinda ukuphakama kwesakhiwo kunye noqoqosho olucacileyo kuyilo kunye noqamba.
Nangona kunjalo, inokuphazamisa ukucwangciswa kwangaphakathi kunye nendawo yeengcango kunye neefestile. Kungenxa yoko le nto izakufakwa ngaphakathi kunye nemigca yeendonga kunye neesahlulelo.
Egqithileyo Indlu yentsimbi ephezulu